China Submersible nsị n'efu mmiri mmiri Submerged mgbapụta ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Tongke
Nodị No ： WQ
Vetikal tobaim drainage mgbapụta na-bụ-eji maka pumping dịghị corrosion, okpomọkụ na-erughị 60 Celsius C, kwụsịtụrụ solids (bụghị gụnyere eriri, grits) erughị 150 mg / L ọdịnaya nke nsị ma ọ bụ mmiri na-adịghị. LPT ụdị mgbapụta mmiri na-agbapụta bụ na nfuli mmiri nke LP, na ndabere nke mmụba na olu akwa ahụ, setịpụ mmanụ mmanụ mmanụ bụ mmiri. Nwere ike ị smokeụ sịga na-ekpo ọkụ n'okpuru 60 Celsius C, zipu ịnwe ụfọdụ ọka siri ike (dị ka iron na scrap na ezigbo ájá, kol, wdg) nke nsị ma ọ bụ mmiri mkpofu.
Obere ihe owuwu
Ọgụgụ isi maka ọrụ nchekwa
Obere ego na-agba ọsọ
Nkọwa Njirimara maka WQ usoro Submersible Sewage pump
1. Ọtụtụ n'ime ndị na-ere ihe na mgbapụta nke oghere dị n'okpuru 400 na-abịa dị ka onye na-agba ọsọ bi-bile ma ole na ole n'ime ha bụ multi-agụba centrifugal impeller. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ndị na-ere ihe na mgbapụta nke oghere 400 na n'elu na-abịa dị ka ngwakọta agwakọta agwakọta na ole na ole n'ime ha bụ ndị na-agba ọsọ bi-run. Nnukwu igwe na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-eme ka ihe siri ike na-agafe ngwa ngwa na eriri ndị na-emechi ka ọ bụrụ nke kachasị adaba maka ịhapụ nsị na unyi.
2. Abụọ nọọrọ onwe ha otu ọgwụgwụ ihu n'ibu akàrà na-usoro n'ịnyịnya, na nwụnye mode dị ka esịtidem echichi mode, na, jiri ya tụnyere mpụga echichi mode, na-ajụ bụ ihe na-erughị ala ihihi na kwa ya akara esemokwu ụzọ dị mfe. lubricated site na mmanụ n'ime ụlọ mmanụ. A na-eji oghere dịpụrụ adịpụ pụrụ iche ma ọ bụ obere mmiri iji guzogide mkpụrụ ọka siri ike ka a ga-edebe ya na akara igwe site na mgbapụta iji jide n'aka na ọ kwụsiri ike. The pụrụ iche n'ibu akara layout mode na-amị Nchikota na-eme ka nkwusioru ogwe aka nke aro mkpụmkpụ, a arọ rigidity na a obere na-awụlikwa elu, ọzọ uru maka mbenata ihihi si n'ibu akara na ịgbatị ndụ nke ya.
3. Moto nke ọkwa IPX8 na-echebe na-arụ ọrụ na ọnọdụ submerged ma na-ejide mmetụta jụrụ oyi kacha mma. Mwepu nke ọkwa F na-eme ka ikuku ikuku a dị elu karịa ya, ma e jiri ya tụnyere motọ ndị ọzọ, na-adịgide adịgide karị.
4. Ngwakọta zuru oke nke ụlọ ọrụ nchịkwa eletrik pụrụ iche, ọkwa mmiri mmiri na-ese n'elu mmiri na ihe nchebe na-eburu nyocha na akpaka maka mkpuchi mmiri na ikpo ọkụ ọkụ, nchebe na obere oge, bufee, enweghị oge nkwụsịtụ nkwụsịtụ ọkụ, njikwa njikwa akpaaka nke mmalite, nkwụsị, ntugharị na opekempe omimi nke mgbapụta ahụ, na-enweghị mkpa nke ndị pụrụ iche maka ilele anya, nhọrọ dị na uche dị n'etiti nkwụsị na-ewedata onwe ya na mbido kọmputa. bido. Ihe ndị a niile na-eme ka ojiji nke mgbapụta wee nwee nchekwa na ntụkwasị obi na-enweghị nsogbu ọ bụla.
5. Ma akụrụngwa abụọ na akụkụ hydraulic jikọtara ọnụ, na-enweghị mkpa ịgbanye okporo maka etiti, dị mfe gbasasịa ma gbakọta iji chekwaa oge, rite uru maka mmezi saịtị ahụ, na-ebelata oge ịkwụsị, na-echekwa ego mmezi; Ọdịdị dị mfe na kọmpat na-ahapụ obere olu, ọ bụ naanị ngwa ngwa mbuli elu ka achọrọ, ebe a na-edozi onye na-ebuli ihe pụrụ iche na mgbapụta ahụ; enwere ike itinye obere ala na mgbapụta ahụ na ọdọ mmiri mmiri mmiri, na-enweghị mkpa ụlọ mgbapụta pụrụ iche, yabụ enwere ike ịchekwa ego ụlọ ihe karịrị 40.
6. A na-enweta ya na usoro ntinye ise ị ga - ahọrọ: akpaka ejiri, ọkpọkọ ike na - ebugharị, obere ọkpọkọ agịga, ụdị mmiri mmiri na ụdị usoro ehicha.
Ntinye aka na ntinye aka pụtara njikọ dị n'etiti mgbapụta na pipeline mmiri na-apụta na oche ntaneti mmiri nke njikọta akpaaka, na-ejighị ndị na-ejikarị ngwa ngwa, na, mgbe ikewapụ mgbapụta na ọkpọkọ mmiri. Oche, tinye ya na mkpanaka nduzi wee bulie ya, naanị iji nweta nchekasị na nsogbu ma chekwaa oge.
Mgbapu mmiri nke mmiri a na-agbanye mmiri na ntinye akọrọ agbatịghị naanị nwere ike dochie mgbapụta mmiri mmiri ochie na-atụ egwu mana ọ naghị atụ egwu ide mmiri ide mmiri, yabụ na ọ dịghị mkpa ụlọ ọrụ na-egosi idei mmiri dị iche iche, uru maka iweda ụgwọ nke iwu.
Ihe nrụnye ọkpọ ọkpọ na-arụ ọrụ na ọkpọkọ dị nro, yana ụdị mmiri mmiri edozi, bụ ụzọ dị mfe nke ntinye.
7. Enwere ike ịtọ usoro sistemụ igwe ikuku na mgbapụta ahụ, nke nwere ike ọ bụghị naanị zuru oke igwe ahụ kamakwa ọ ga-enye aka maka iweda ọkwa nke ọdọ mmiri mmiri ka ọ nwee ike ịsachasị nsị n'ime ya ruo oke ogo.
8. Mgbapụta ahụ na-arụ ọrụ n'ime ọnọdụ submerged, yabụ enweghị nsogbu mkpọtụ na uru maka nchedo gburugburu ebe obibi.
Nke gara aga: MVS Vetikal Axial na-aga na Mixed eruba submersible nsị mgbapụta
Osote: Kwụ Split casing centrifugal oké osimiri mmiri ebe mgbapụta
Ike 10-8000 m3 / awa
Liquid okpomọkụ ruru 60 ºC
Ọrụ nrụgide ruo ogwe 18
Akụkụ ndị dị mkpa maka mgbapụta mmiri nsị WQ
Nkebi Ihe onwunwe
Mgbapụta casing & mgbapụta mkpuchi Igba ígwè, Ductile iron, igwe anaghị agba nchara
Impeller Igba ígwè, Ductile iron, igwe anaghị agba nchara, Ọla, Duplex SS
Igwe nkpuchi Nkedo ígwè
Aro 2Cr13, 3Cr13, Duplex SS
Mechanical akara Frictional ụzọ Graphite / Silicon Carbide
Eserese / Tungsten Carbide
Silicon Carbide / Silicọn Carbide
Silicọn Carbide / Tungsten Carbide
Tungsten Carbide / Tungsten nke Carbide
Mmiri Igwe anaghị agba nchara
Akụkụ Rubber NBR
nsị ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Mmiri nsị iji gbapụsị nsị mmiri
Ahịhịa mbufe mmiri oru ngo
Mmiri mmiri ozuzo nke nwere ihe siri ike na ogologo akwara
API610 ANSI Chemical Usoro ọkọlọtọ Petrochem ...
Multisatge elu nsogbu centrifugal ọkụ mgbapụta
CZ kwụ Single Stage End mmiri Centrifu ...
CZ kwụ centrifugal ọgwụgwụ mmiri oké osimiri ...